Mayelana NATHI - QUANZHOU HOPE SHOE Co, Ltd.
Senza izinto ngokuhlukile, futhi yindlela esithanda ngayo!
Isungulwe ngonyaka ka-2010, inkampani yethu ingumkhiqizi wezicathu ochwepheshe. Inkampani yethu itholakala edolobheni laseQuanzhou, esifundazweni saseFujian. Ukusuka lapha sinikezela ngemisebenzi ye-R & D, Production, Logistics, Ukuthenga kanye ne-Order Support. Sineqembu labathengisi abaqeqeshiwe ukuhlinzeka insizakalo ephelele futhi engaphansi, ekuvumela ukuthi udale noma yimuphi umdwebo owufisayo futhi ukhiqize noma yiziphi izicathulo ozifunayo.
Ukukhiqiza Amandla: izicathulo ezi-ngababili eziyizi-2,5,3 ngonyaka ngonyaka
Imali engenayo yonyaka: ngaphezulu kwezigidi ezingama- $ 20 futhi iqhubeka ikhula ngokuqinile
No. Imayini Yokukhiqiza: 3
Izimakethe Eziyinhloko: INyakatho Melika, iYurophu, iNingizimu Melika, iJapan
Imikhiqizo eyinhloko: izicathulo zezemidlalo, izicathulo ezijwayelekile, izicathulo zangaphandle namabhuzu.
Amakhasimende Abalulekile: ama-Skechers, Diadora, Gola, Kappa, njll.
Senza izicathulo ezethu amakhasimende isifiso. Siyayazi imakethe, ilandela intuthuko eduze futhi siyakwazi ukuphendula izitayela ezintsha ngokushesha okukhulu.
Zonke izicathulo ziqala ebhodini lokudweba labakhi. Umdwebo kanye nesampula efanelekile kuvezwa. Ukukhiqiza kuqala lapho yonke imininingwane ihlangabezana nezidingo zekhasimende. Amakhasimende amaningi asevele enelebuli yawo ekhiqizwe ngale ndlela. Ungathanda ukulandela ezinyathelweni zabo?
Izicoco Zethu Zenzelwe Inzuzo Yakho
Ngokujoyina amabutho nathi, unozakwethu ongakusiza ukufezekisa inzuzo ephezulu yokuthengisa izicathulo. Isibonelo, izinkampani embonini yezemfashini ebezingenazo izicathulo emabangeni azo, kepha ezazi ithuba. Basondele kithi ukuthola izeluleko nemininingwane ukuthola izinketho, bazivumela ukuthi zingene kulomhlaba omusha wezicucu ezilungiselelwe kahle. Ekuhlangenwe nakho kwethu - ezimweni eziningi, lezo zinyathelo zokuqala zokuqaphela sezikhule zaba ubudlelwane bebhizinisi besikhathi eside ngokususelana ekuthembaneni, isipiliyoni kanye nasekuguqukeni kwezimo.
Ukuba Nesipiliyoni seminyaka eyi-10 Ekuthengiseni Izicucu Nokwakha.
Besilokhu sikhiqiza futhi sikhipha izicathulo kusukela ngo-20120. Kusukela lapho, izigidi zababili zitholakele kubesilisa, abesifazane kanye nezingane emhlabeni wonke jikelele. Senza izicathulo kunoma yisiphi isitayela, umbala nokuklama okufiswa amakhasimende ethu. Imikhiqizo yethu inobungani bemvelo futhi ingathobela i-REACH, CISIA kanye nolunye uhlobo lokuhlolwa kwamakhasimende.